Madagasikara: Nosivanin’ny Fitondrana Frantsay ny piesy teathralin’ny Tolom-panafahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2008 19:13 GMT
Nofoanan'ny fitondram-panjakana tsy misy fanazavana ny fitetezan-tany ny piesy teathraly mampahatsiahy ny tolom-panafahana manana ny anjara toerany eo amin'ny tantaran'i Madagasikara.
Ny piesy teathraly, niarahana novokarina tamin'ny CulturesFrance, dia efa nokasaina holalaovina an-tsehatra tany amin'ny fioben-kolontsaina tany Kômôro, Maorisy, la Reunion ary toerankafa ihany koa, saingy nofoanan'ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny (frantsay) ny fifanarahana.
Mampitamberina ny tsiahy maharary eo amin'ny zokiolona maro ny tantaran'ny 29 Marsa 1947. Io manko ny fotoana namotehan'ny Frantsay araka ny heriny manontolo ny iray amin'ireo tolona Malagasy voalohany nitakiana ny fahaleovantena tamin'ny fanjakana lehibe nanjanaka azy. Niteraka fahafatesana anelanelan'ny 30 000 sy 100 000 izany tolona izany (Mbola iadiankevitra eo amin'ny samy mpahay tantara hatramin'izao ny isa marin'ny olona maty).
Na dia efa neken'ny fitondrana Frantsay ho fandripahana amin'ny maha-heloka anaty ady tamin'ny 1951 sy faneriterena tafahoatra namaizana ny mpitolona tamin'ny 2005 aza ity raharaha 1947 ity dia mbola tsy fantatra mazava izay momba azy na eto Madagasikara izany na amin'nysehatra iraisam-pirenena. Mba hahafantarana ny momba azy kokoa ary dia nanapa-kevitra ny hamokatra azy holalaovina an-tsehatra ny mpanoratra Malagasy fantadaza iray, Jean-Luc Raharimanana sy ny talen'ny (filalaovana an-tsehatra) Frantsay iray Thierry Bedard ary nanangana ny piesy iray mitondra ny lohateny hoe “47” (fr) izay namerina indray ny fandehan'ny tantara sy ny fahasarotan'ny fifandraisana nisy teo amin'ny voanjo nitondra sy ny saramambem-bahoaka.
Ity ambany ity misy sombin'izany piesy izany:
47 Raharimanana avy amin'i notoire
Taorian'ny filalaovana an-tsehatra ny tantara tany amin'ny tanàna roa tany amin'i Taniben'i Frantsa, dia nofoanan'ny departemantan'i raharaham-bahiny sy ny fampandrosoana ny fikasana hilalaovana azy aty amin'ny tapany atsimon'i Afrika sy ny ranomasimbe Indiana.
Nanangatra mafy tokoa ny mpamorona ny piesy Jean-Luc Raharimanana nahita ity fanapahan-kevitra ity raha ny hita ao amin'ny bolongana Rue89 no jerena (fr):
Mitambesatra amin'ny tsiaro ny fahanginana. Efa manomboka miteny ny olona. Toa te-hahazo ny fandehan'ny raharaha na lahy na vavy. Fa tena misy tokoa ny faniriana te-hiara-monina [..] Nahoana no nisy ny 1947, Nahoana no roa taona taorian'ny ady [lehibe] sy ny “aoka izay ho mandrakizay” no nisy fandripahan'olona anisan'ny mahatsiravina teto Madagasikara ? [..] Izany fahanginana izany no trandrahin'ny 47. Tantara iraisana. Mahery setra. Mila fitandremana mafy. Tantara iray mampitamberina antsika indray ilay fitiavan-kiara-monina, te-hahazo vinany izay rovitra, ny nofo voakapokapoka sy nampijaliana, Ny fanapenam-bava sy ny tsy lazalazaina manimba ny fanahy. [..] Saingy hafamoa ny fanapahan-kevitry ny DGCID ( department of Foreign Affairs). Sivana eo amin'ny zavakanto. Fandrarana ny fitondrana ny hafatra any amin'ny foiben-kolontsaina Afrikana sy ny alliances francaises[…] Saingy tsy raharahan'ny tsiahy izany sivana izany na dia sivam-panjakana aza. Efa lalim-paka ny ny fitianana hahalala, indrindra fa amin'izao fotoana ahafahana misintona kely izao mba hahenoana azy tsara, sy ahafahana mifanakalo tsara amin'ny zava-drehetra.
Nisy mpamaha-bolongana vitsivitsy moa nitatitra ityvaovao ity tany amin'ny bolongany avy. mifangaroharo ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra ao moa na tsy firaharahiana na fanivaivàna ny tenin-dRaharimanana.
Misy ny vitsy tsy ahita izay ilàna ny efa lasa. Mechante Langue ohatra (fr):
Aza milalao ny toy ny maritiora e! Sa, resaka matotra ity, izany no heverinareo zava-dehibe tokony ampangaina indrindra any Madagasikara amin'izao fotoana izao, ny fandripahana tamin'ny 1947?…tena izany ve ?”
Izay novalian'i Monsieur Lambda hoe (fr):
tena miharihary tokoa fa tsy azonao izany hoe fandripahana izany, ary raha itarina, dia ny toerana misy azy eo amin'ny fahatsapana malagasy, fa raha eo amin'ny lanjany dia azo oharina Nahazoana an'i Bastille izany eo amin'ny vahoaka Frantsay.
Juan Pablo de Tagéna mieritreritra raha nilaina tokoa izany tolom-panafahana tamin'ny mpanjanatany izany (fr):
Ankehitriny dia tsy ho nitady izany fahaleovantenany izany ny malagasy raha anontaniana: 99% n'izy ireo dia mety hitady ny fitazonana azy ao amin'ny Firaisambe frantsay ihany.
Ao amin'ny facebook, misy ny resaka manokana izay mandeha momba ity fandrarana ity, Soaray Rabarimampianina (Nolazaina anarana nahazo alalana avy aminy) dia mihevitra fa mbola betsaka ny tokony hiadian-kevitra malalaka amin'ny sombin'ny tantara tahaka itony.
Mbola lavitra ny lalana mialoha ny haneken'i France ity anisan'ny tantarany dia ny fanjanahantany izany
Eo amin'ny resaka ihany no nasongadin'i Tsilavina Ralaindimby raha miresaka ity vanim-potoanan'ny fanjanahantany ity, ny fandraisana anjaran'ny miaramila avy any amin'ny zanatany niady ho an'i Frantsa nandritra ny ady lehibe roa (fr):
Fanadihadiana momba ny Malagasy mpitifitra izany tonga hiady ho an'i Frantsa nandritra ny 14/18 io ary maro no maty tany. Any Menton, [..] dia misy toeram-pasana izay ahitana ny fasan'ireo miaramila Malagasy ireo mitandahatra mihitsy.
Nandray anjara tamin'ny rohy sy ny fifantenana i Jentilisa .